The Client ( 2011 ) - Myanmar Asian TV
Rating: IMDb 6.9/10 , MyDramalist 8.2/10ထိရရှိထားတဲ့ 2011 မှာထွက်ရှိထားတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ
အဓိကသရုပ်ဆောင်တွေကတော့ ပရိသတ်တွေရင်းနှီးပြီးသား မင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Jang Hyuk,Ha Jung Woo နဲ့ Park Hee Soon တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
အဲ့လိုနဲ့သူ့အိမ်ခန်းထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူတို့အိပ်ရာကတစ်ဆင့် ကြမ်းပေါ်ကိုတစ်စက်စက်ကျနေတဲ့ သွေးကွက်အကြီးကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်
အမှုစစ် အန်မင်ဟို… ဟန်ချောမင်ရဲ့ လူသတ်မှုကိုတာဝန်ယူစစ်ဆေးတဲ့သူ
မတွေ့ရဘဲ ဟန်ချောမင်းသတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်မာတဲ့သက်သေတွေလည်းမရှိဘူးဆိုပြီး ဟန်ချောမင်းဘက်ကလိုက်ပေးမယ့်ရှေ့နေ
ရှေ့နေနဲ့အမှုစစ်၂ယောက် ဒီအမှုကိုအပြန်အလှန်ဘယ်လိုတွေ လျှောက်တင်ကြမလဲ?
တရားခံအဖြစ်အဖမ်းခံရတဲ့ ဟန်ချောမင်းကကောတကယ်ပဲ သူ့မိန်းမကိုသတ်ခဲ့တာလား?
မှားယွင်းပြီးပဲ အဖမ်းခံရတာလား? ဆိုတာ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ရှူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
Translated by Aye Pa Pa Htun
Reviewed by HMN
Actors: Ha Jung-woo, Jang Hyuk, Jung Won-joong, Kim Sung-ryung, Park Hee-soon, Sung Dong-il, Yoo Da-in
Openload.co Myanmar833MB Download Soliddrive.co Myanmar833MB Download
Trailer: The Client ( 2011 )